XOG: Itoobiya oo sheegtay Sababta ciidamadooda uga baxayaan Somalia! | Horumar Online
XOG: Itoobiya oo sheegtay Sababta ciidamadooda uga baxayaan Somalia!
October 26, 2016 | Filed under: WARARKA MAANTA | Posted by: Editor Muqdisho (Horumar Online) – Wasiirka warfaafinta ee Itoobiya, Getachew Reda, ayaa ka hadlay sababta ay ciidanka dalkiisa uga baxeen deegaanno ka tirsan koonfurta Soomaaliya.
Waxa uu sheegay in dhammaan ciidamada aanan ka midka ahayn AMISOM ay kala baxayaan Soomaaliya.
“Joogitaankeena Soomaaliya ayaa ah laba nooc. Laba kun oo askari ayaa nagaga jira AMISOM”. Ayuu yiri wasiirka warfaafinta Itoobiya.
Wuxuu intaasi ku daray, “Waxaa intaa dheer dhowr kun oo askarteena ah kuwaas oo caawinaya AMISOM iyo ciidanka dowladda Federaalka ah ee dagaalka kula jira Alshabab. Balse sida aan marar badan horay u sheegnayba, askarkeena ka tirsan AMISOM waxa ay Soomaaliya sii joogi doonaan inta ka dhiman muddada howlgalkooda, balse qasab ma ah in ay halkaa naga sii joogaan ciidanka kale ee aan AMISOM hoos tegin”.
Wasiirka warfaafinta ee Itoobiya, Getachew Reda, ayaa xaqiijiyay in ciidamadii ay kala bexeen deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan ay ahaayeen kuwa aan ka mid ahayn AMISOM.
Ciidamada Itoobiya ayaa saaka aroorti ka baxay deegaanka Tiyeeglow ee gobolka Bakool ayaa waxay sheegayaan in ciidamada Itoobiya ay halkaasi ka bexeen.
Dagaal yahanada Alshabaab ayaa la wareegay magaaladaasi kaddib markii ciidamadaasi ay baneeyeen.
Ciidamada Itoobiya oo ka mid ah howlgalka AMISOM ayaa waxa ay u bexeen dhanka degmada Xudur ee gobolka Bakool, sida dadka goob jooga ah ay BBC-da u sheegeen.
Ciidamada dawladda iyo kuwa Itoobiya waxa ay qabsadeen Tiyeeglow 25kii bishii August ee sanadkii ee 2014.
“Saaka aroortii ayey ciidamada Itoobiya ka guureen Tiyeeglow”, ayuu yiri qof ka mid ah dadka deegaanka oo intaasi ku daray “Alshabaab ayaa magaalada soo gashay oo hadda ku sugan”.
Tiyeglow waa magaalo istiraatiiji ah, waxa ay isku xirtaa gobolada Hiiraan iyo Bakool, waxayna qiyaastii 90 km u jirtaa magaalada xarunta u ah gobolka Bakool ee Xudur, sidoo kale waxa ay 140 km u jirtaa magaala madaxda gobolka Hiiraan ee Beledweyne.
Ciidamada Itoobiya waxa ay bilihii ugu danbeeyay ka baxeen deegaanada Ceel Cali, Moqokori, iyo Halgan ee gobolka Hiiraan. Dhinaca gobolka Bakool waxa ay isaga baxeen deegaanada Rabdhuure, Buurdhuxunle, iyo Garasweyne. Dhinaca gobolka Galgaduud waxa ay ka guureen deegaanada Budbud, iyo Galcad.
Bixitaankan u dambeeyay ee Tiyeglow ayaa imaanaya iyadoo dowladda Itoobiya ay wajaheyso mucaaradad xooggan iyo mudaaharadyo rabshado wata oo ka socda gudaha Itoobiya.